Home Wararka Dibada Suxufiyiin katirsan Reuters oo ku Dhaawacmay Severodonetsk halka uu dhintay wadaha Gaari...
Suxufiyiin katirsan Reuters oo ku Dhaawacmay Severodonetsk halka uu dhintay wadaha Gaari ay la socdeen.
Gaari ay la socdeen sawir iyo muuqaal qaadayaal katirsan Reuters oo mararay inta u dhaxeysa Severodonetsk & Rubizhne ayaa ku dhaawacmay rasaas halka uu dhintay wadaha gaarigii ay la socdeen sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan.
Alexander Ermochenko oo ah Sawir qaado iyo Pavel Klimov oo qudhiisa ah Muuqaal Duube ayaa Jimcihii ka gudbay waddo ay isku hor fadhiyaan Ciidamo katirsan Ruushka iyo kuwa Ukraine ee dagaalka iskala soo horjeeda.
Labada Suxufi ayaa la geeyay Isbitaal ku yaalla Magaalada Rubizhne si looga daweeyo dhaawacyada kasoo gaaray rasaasta lagu furay Gaarigii ay la socdeen sidaasi waxaa xaqiijiyay saraaakiil katirsan maamulka Isbitaalka.
Alexander Ermochenko waxaa dhaawaca soo gaaray lagu sheegay firir yar oo soo gaaray, halka Pavel Klimov uu gacanta ka jabay, xaaladdooda caafimaad ayay dhaqaatiirtu ku sheegeen in ay kasoo wanaagsanaaneyso markii dhaawaca uu soo gaaray.
Duullaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine waxaa ka dhashay dhimasho, dhaawac, Barakac iyo Burbur xooggan oo soo gaaray Dalkaas, 101 cisho waxa uu dagaalka ka socdaa Ukraine iyada oo guullo kala sheeganayaan Xukuumadaha Moscow & Kyiv.
Previous articleTed Sams oo ah 78 jir 60-sano ku qaadatay in uu qaato Shahaadada Dugsiga Sare!
Next articleQM oo sheegtay in 1.5 Milyan oo Carruur ah ay Soomaaliya ku wajahayaan macluul.
laamaha Amniga oo sheegay inay qabteen dad lagu tuhmayo qarixii Sarkaalka...
Taliyaha Saldhiga Boliiska Degmada shibis ee Gobalka Banaadir ayaa loo magacaabah...